Jarmalka oo u aqoonsaday golaha qaranka KMG Libya kan keliya ee matala shacabka – SBC
Jarmalka oo u aqoonsaday golaha qaranka KMG Libya kan keliya ee matala shacabka
Berlin:- Xukuumadda Jarmalka ayaa u aqoonsatay golaha KMG Libya kan kaliya ee sida sharciga ah u matala shacabka Libya, xilli xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka ay ugu baaqaday madaxda Africa in ay xiriirka u jaraan Mucammar Al-qadaafi.
Aqoonsiga Jarmalka ayaa ku soo beegmaya xilli wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka ninka lagu magcaabo Guido Westerwelle ( Giiduu westar weelle ) kulan kula yeeshay magaalada Benghazi ee bariga Libya madaxa golaha qaranka KMG Libya C/xafiid Quuqa.
Westerwelle oo ay shir jaraa’id ay wada qabteen mas’uulka u qaabilsan arrimaha dibadda golaha KMG Libya ninka lagu magcaabo Cali Ciisaawi ayaa sheegay in u jeedadooda ay tahay mid keliya taasi oo ah Libya oo Qadaafi uusan ka talinayn iyo in golaha qaranka KMG uu yahay midka kaliya ee sida shaciga ah u matalaya shacabka Libya.
Mas’uulka Jarmalka ayaa yiri “Qadaafi muddo kabadan afartan sano ayuu ka talinayey dalka Libya balse hadda waa in uu xukunka isaga degaa , wuuna tagi doonaa sidaas ayaan ku qanacsanahay”.
Sidoo kale xukuumadda Jarmalka ayaa sheegtay in ay siinayso kooxaha kacdoonka toddobo malyan oo Euro oo u dhiganta 10 malyan oo dollar iyo kaalmooyin deg deg ah oo KMG ah si loo taageero nabad ku soo dabaalida Libya.
Wasiirka oo booqashadisa ay ku wehliyaan wasiirka horumarinta caalamiga Dirk Nable iyo mas’uuliyiin kale ayaa ku nuuxnuuxsaday in dalkiisu uusan weli ku taagan yahay mowqifkiisii ahaa in Qadaafi uu waayey sharciyadii uu ku matali lahaa shacabka Libya.
Wasiirku waxa uu tilmaamay in ka qeyb gal la’aanta dalkiisu howlgalada milatari ay NATO kawado dalka Libya aysan ahayn in Berlin ay Qadaafi taageersan tahay.
Golaha qaranka KMG Libya ayaa waxaa si rasmi ah ugu aqoonsaday in uu yahay kan keliya ee matala shacabka Libya ugu yaraan shan dowladood oo Yurubiyaan ah iyo dalal carbeed oo ay kamid yihiin Qadar iyo Imaaraatka carabta.